Kedu ihe bụ nkwenye na iwu? | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Kedu ihe bụ nkwenye na iwu?
The Mmejọ Mmejọ Mmekọahụ na England na Wales na 2003, na Iwu Mmekọ Mmekọahụ na Scotland na 2009, wepụta ihe nkwenye pụtara maka ebumnuche nke mkpesa n'okpuru iwu mpụ.
Iwu ahụ agbatịwo nkọwa nke ọdịnala nke mmeko nwoke na-agụnye ihe niile gbasara mmekọahụ ma mee ka ọ bụrụ mkparị nke "mmadụ (A) iji tinye ya n'ahụ ahụ, (ma ugbu a, ụbụrụ ma ọ bụ ọnụ onye ọzọ (B), ma ọ bụ n'echeghị echiche ma ọ bụ na-eme ihe n'echeghị echiche, na-enweghị nkwenye nke onye ahụ, na n'enweghị ezi nkwenkwe B na-ekwenye. "
N'okpuru iwu Scottish, "nkwenye pụtara nkwekọrịta n'efu."
“59. Nkebi nke abụọ (2) (a) na-enye na enweghi nkwekọrịta efu ebe omume a na-eme n'oge onye mkpesa enweghị ike, n'ihi mmetụta mmanya ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, nke ikwenye na ya. Mmetụta nke ngalaba nke a abụghị inye mmadụ na ọ gaghị ekwenye na inwe mmekọahụ mgbe ọ afterụsịrị mmanya ọ bụla ma ọ bụ takingụọ ihe ọ intoụ intoụ na-egbu egbu. Mmadụ nwere ike consumedụọ mmanya na-aba n'anya (ma ọ bụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ na-egbu egbu), ọ pụkwara ọbụna ị beụbiga mmanya ókè, na-enweghị ikike ikwenye. Otú ọ dị, mgbe ọ isụbigara mmanya ókè ka ọ ghara inwe ikike ịhọrọ ma ọ ga-esonye na mmekọahụ, omume ọ bụla metụtara mmekọahụ, na-eme ya na-enweghị nkwenye nke onye mkpesa ahụ. ”
Kedu ihe ọ bụ na onodu? N'iwu obodo, mgbe ị na-eme nkwekọrịta, dịka nkwenye pụtara nkwekọrịta na otu ihe. Na iwu mpụ, ọ pụtara ihe dịka ikike. Ndi oru iwu na-acho itinye echiche banyere ojiji na iji ike eme ihe n'ime ha. Chọpụta 'nkwenye' bụ otu n'ime ebe mgbagwoju anya nke iwu mpụ na mmejọ mmekọahụ. E nwere isi ihe atọ kpatara nke a.
Akpa, o siri ike ịmara ihe na-emenụ n'uche onye ọzọ. Ị na-agba mgba na-egosi na inwe mmekọahụ enwere ike ugbu a ma ọ bụ naanị ịkpọ òkù ịmalite ịmalite mmekọrịta gị na ohere ị ga-enwe mgbe ị na-enwe mmekọahụ? Ọ bụ iwu na-elekọta mmadụ ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka ụmụ nwoke nwee ike karịa 'ịkwado' ụmụ nwanyị ka ha soro ha nwee mmekọahụ na ndị inyom ka ha na-edo onwe ha n'okpuru ma na-erube isi? Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-akwalite echiche a banyere mmekọahụ.
Nke abụọ, a na-arụkarị ọrụ nzuzo na nzuzo na-enweghị ndị akaebe. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na esemokwu gbasara ihe mere, ndị juri nwere ike ịhọrọ akụkọ banyere otu onye karịa nke ọzọ. Ha na-enwetakarị ihe akaebe nke ihe mere tupu ihe ahụ emee dị ka ihe nwere ike ịbụ n'uche nke ndị ọzọ. Kedu ka ha si akpa agwa na nnọkọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ebe a na-a aụ mmanya ma ọ bụ ụdị mmekọrịta ha nwere na mbụ, ọ bụrụ na ọ dị? Ọ bụrụ na enwere mmekọrịta ahụ na ịntanetị naanị nke ahụ nwere ike isiri ike igosi.
Nke atọ, n'ihi nsogbu nke nwere ike ịmalite ịwakpo mmekọahụ, ihe onye mkpesa ahụ chetara banyere eziokwu na ihe ndị kwuru ma ọ bụ nkwupụta n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị nwere ike ịdịgasị iche. Nke a nwere ike ime ka o siere ndị ọzọ ike ịma ihe mere n'ezie. A na-eme ka ọnọdụ ahụ bụrụ ihe ịma aka mgbe mmanya na ọgwụ ọjọọ gwụrụ.
Ihe ịma aka nye ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ na akụkụ uche nke ụbụrụ na-eme ka ha nwee obi ụtọ na-enwe mmekọahụ, ịnwe ihe egwu na nnwale, ebe akụkụ ụbụrụ nke nwere uche na-enyere aka igbochi omume na-adịghị ize ndụ amalitebeghị. Nke a na - eme ka o sie ike karị mgbe mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ nọ na ngwakọta. N'ebe enwere ike ka umu okorobia choro 'nkwenye siri ike' inwe mmekorita nwoke na nwanyi ma lezie anya nke oma na enyere nkwenye mgbe ndi ozo na-a isụbiga mmanya ókè. Iji kuziere ụmụaka ihe a, gosi ihe ọchị a eserese na-atọ banyere nkwenye iko iko tii. Ọ mara ihe ma nyere aka mee ka isi okwu ahụ pụta.
Nkwenye ekwenye bụ ụdị nkwenye nke esemokwu nke mmadụ na-enyeghị nke ọ bụla, kama ọ sitere na omume mmadụ na eziokwu na ọnọdụ nke otu ọnọdụ (ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ, site na mmadụ ịgbachi nkịtị ma ọ bụ enweghị ọrụ). N’oge gara aga, otu di na nwunye lụrụ di na nwunye bụ ndị nyere “nkwenye ekwenye” ka ha nwee mmekọ n’etiti onwe ha, nkuzi nke na-egbochi ikpe onye di na nwunye maka idina mmadụ n'ike. A na-ewerezi nkwenkwe a ka ọ gharazie ịba uru n'ọtụtụ mba. Otú ọ dị, ị addictionụ ọgwụ ọjọọ riri ahụ nwere ike iduga ụfọdụ ụmụ nwoke ịgbalị gabiga ókè ịmanye ndị nwunye itinye aka na mmekọahụ n'enweghị nkwenye ha. Lee akụkọ a site na Australia.
<< Age nke Nkwenye Gịnị bụ Nkwenye na Omume? >>